Qadar oo maanta bilabayso dhisida wadooyin ay horay u balan qaaday | Wardoon
Home Somali News Qadar oo maanta bilabayso dhisida wadooyin ay horay u balan qaaday
Qadar oo maanta bilabayso dhisida wadooyin ay horay u balan qaaday
Waxaa maanta oo Isniin ah lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu dhagax dhigo Mashaariic dhismo wadooyin oo ay horey u balan qaadeen dowlada Qadar in ay ka fulineyso Soomaaliya.
Mashaariicda maanta la dhagax dhigayo ee dowlada Qadar maalgalineyso ayaa waxaa kamid ah dhismaha Wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho iyo labada gobol ee Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhaxe.
Madax sare oo katirsan dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa in ay dhagax dhigaan mashaariicdan horu marineed ay maalgalineyso dowlada Qadar oo hada saaxiib dhaw la ah Soomaaliya.
Qaar kamid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ayaa saakay loo xiray dhagax dhiga mashaariicdan, waxaana wadooyinka xiran kamid ah Laamiga Wadnaha ,30-ka iyo Laamiga Warshadaha qeybo kamid ah.
Dowlada Qadar ayaa horey u balan qaaday in ay dhiseyso Wadooyinka Muqdisho ku xira labada Shabeelle, waxa ay sidoo kale dowlada Qadar balan qaaday in ay fulineyso mashaariicyo kale oo dan ugu jirto Soomaaliya.
Previous articleKenya oo Sedex Shardi ku xirtay inay la Heshiiso Somalia
Next articleXisbiga Wadajir oo taageeray dowlada Somalia
Dhageyso:- Korneel Shariif Roobow Wasiir Ducaale waa fashilmay, ha is-casilo
Xildhibaan Ciyaar jacel”Dastuurka waa mashruuc 60 Millyan ayaa lagu cunay +VIDEO